के आर्यन खानले ड्रग्स लिएका छन्? - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : ९ कार्तिक २०७८, मंगलबार ५ : ५६
भारतको लागु–औषधविरुद्धको सरकारी संस्था नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरो एनसीबीले २ अक्टोबरमा मुम्बईको एक क्रुज जहाजमा छापा मारेको थियो। ड्रग्स पार्टी हुने रेभ पार्टीमा छापा मार्दा आठ जना गिरफ्तार भएका थिए।
जसमध्ये बलिउडस्टार शाहरुख खानका जेठा छोरा आर्यन खान पनि पक्राउ परे। हाल उनी जेलमा छन्। अदालतले आर्यनलाई जमानतमा छाड्न मानिरहेको छैन।
आर्यन खानले ड्रग्स लिएका छन्?
आर्यन खानलाई एडीपीसी कानुनको धारा ८सी, २० बी र ३५ केको आधारमा गिरफ्तार गरिएको हो। उनको चिकित्सकीय जाँच गर्ने भनिएको थियो। तर उनको रगत, पिसाब र कपालको नमूना परीक्षण भएको छैन।
ड्रग्सको मामिलामा पक्राउ परेका अभियुक्तको खुन, पिसाबसँगै कपालको नमूना परीक्षण गरिन्छ। यसले लागुऔषध प्रयोग भएको छ छैन भनेर पत्ता लगाउँछ।
यो अवस्थामा जानकारहरु यो मान्छन कि एनसीबीको पुरा मुद्दा यो विषयका केन्द्रित छ कि आर्यन खान ड्रग्सको तस्करी र योजनामा सामिल थिए। यो आरोपका कारण उनलाई जमानतमा छाड्न सजिलो हुनेछैन।
अधिवक्ता आशिमा मण्डलाले अभियोजन मुद्दामा धेरै कमजोरी रहेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्,‘अभियक्तमाथि जुन धारा लगाइएको छ त्यो ड्रग्सको कब्जा र प्रयोगसँग सम्बन्धित छ। तर अभियोजन पक्ष यी आरोप साबित गर्न कुनै ठोस प्रमाण पेश गर्न सकिरहेका छैनन्।’
मण्डलाका अनुसार सुरुवातमा एनसीबीले आर्यन खानसँग ड्रग्स भेटिएको बताएको थियो। तर पछि एनसीबीले ड्रग्स भेटेको अस्वीकार गरेको थियो। आर्यनले ड्रग्स लिएको भनेर पनि चर्चा भएको थियो तर आर्यनले हालसम्म ड्रग्स लिएको कुनै चिकित्सकीय प्रमाण छैन।
तर यो प्रश्न उठ्छ कि आर्यन खानको चिकित्सकीय जाँच किन भएन?